Madaxweyne Geelle [Bidix] oo Madaxtooyada kuso dhaweynaya Keating [Midig] [Sawirka: Online]
JABUUTI - Madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa wuxuu Isniintii shalay Madaxtooyadda ku qaabiley Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Micheal Keating, oo booqasho ku jooga dalkiisa.
Geelle iyo Keating ayaa waxay si qoto dheer ay uga wada hadleen xaalada Soomaaliya, gaara ahaan amaanka, siyaasadda, howlgalka AMISOM iyo xiisadda ka dhaxeysa Puntland iyo Somaliland.
Keating ayaa wuxuu ugu horeyn uu uga warbixiyay Keating Madaxweyne Geelle xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya, isagoo u sheegay inkasta ay jiraan caqabado badan, balse horumaro la sameeyay ay jiraan.
Kulan labadda mas'uul ayaa waxaa si wayn looga hadlay xiisadda colaadeed ee ka dhaxeysa Puntland iyo Somaliland, taasoo salka ku haysa maamulka gobolada Sool, Sanaad iyo Cayn [SSC].
Keating iyo Geelle ayaa isla qiray inuu dhiig-daata aysan ahayn mid wanaagsan, islamarkaana loo baahan yahay inay ku xaliyaan labadda maamul wax walboo ay kala tabanayaa wadahadal.
Waxay ugu baaqeen dhinacyadda isku haya deegaanada SSC inay xabada ay joojiyaan, islamarkaana ay qaataan nabadda, islamarkaana ay miiska wada-xaajoodka ku dhamaayeen waxay kala tabanayaan.
Jabuuti ayaa xiriir dhaw la leh Somaliland.
Keating horey u booqday Puntland iyo Somaliland, isagoo xal u raadinaya Colaadda Tukaraq, ayaa ugu mahadceliyay Jabuuti kaalinteeda soo celinta nabada iyo xasiloonida Soomaaliya, oo ay Ciidamo usoo dirtay kuwaasi oo ka qeyb ka ah AMISOM.
Socdaalka Keating ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo isbuucaan la filayo in magaalada Garoowe ee xarunta Puntland uu gaaro Wafdiga ka socda Ururka IGAD. [Halkan ka akhri Warka].
Dalka Kenya ayaa ku soo biirey wadamada wadamada qaadaya qaar ka tirsan dhaawacyada...
Soomaliya 26.05.2018. 10:54